VaRoma 8 | Bhaibheri repaIndaneti | Shanduro Yenyika Itsva
8 Naizvozvo vaya vari pamwe naKristu Jesu havapiwi mhosva.+ 2 Nokuti mutemo+ womudzimu+ iwoyo unopa upenyu+ huri pamwe naKristu Jesu wakakusunungurai+ pamutemo wechivi noworufu.+ 3 Nokuti, Mutemo+ zvawakanga usingakwanisi kuita chimwe chinhu, zvawakanga usina simba+ nokuda kwenyama, Mwari akapa mhosva chivi chiri munyama, nokutuma kwaakaita Mwanakomana wake+ nokuda kwechivi,+ ari muchimiro chakafanana nenyama inotadza,+ 4 kuti chinodiwa chakarurama choMutemo chizadzike+ matiri isu tinofamba maererano nomudzimu,+ kwete maererano nenyama. 5 Nokuti vaya vanoita maererano nenyama vanoisa pfungwa dzavo pazvinhu zvenyama,+ asi vaya vanoita maererano nomudzimu pazvinhu zvomudzimu.+ 6 Nokuti kufunga kwenyama kunoreva rufu,+ asi kufunga kwomudzimu+ kunoreva upenyu norugare; 7 nokuti kufunga kwenyama kunoreva kuvengana+ naMwari, nokuti nyama haizviisi pasi+ pomutemo waMwari, uyewo, chokwadi, haigoni kudaro. 8 Naizvozvo vaya vanoita maererano nenyama+ havagoni kufadza Mwari. 9 Zvisinei, muri kuita maererano nomudzimu,+ kwete nenyama, kana mudzimu waMwari uchigara mamuri zvechokwadi.+ Asi kana munhu asina mudzimu waKristu,+ iyeyu haasi waKristu. 10 Asi kana Kristu ari pamwe nemi,+ chokwadi muviri wakafa nokuda kwechivi, asi mudzimu upenyu+ nokuda kwokururama. 11 Zvino, kana mudzimu waiye akamutsa Jesu kubva kuvakafa uchigara mamuri, iye akamutsa Kristu Jesu kubva kuvakafa+ achaitawo kuti miviri yenyu inofa ive mipenyu+ achishandisa mudzimu wake unogara mamuri. 12 Naizvozvo, hama, tine zvatinosungirwa kuita, kwete kunyama kuti tirarame maererano nenyama;+ 13 nokuti kana muchirarama maererano nenyama chokwadi muchafa;+ asi kana mukauraya mabasa omuviri+ muchishandisa mudzimu, muchararama. 14 Nokuti vose vanotungamirirwa nomudzimu waMwari, ivava ndivo vanakomana vaMwari.+ 15 Nokuti hamuna kugamuchira mudzimu wouranda unokonzera kutya+ zvakare, asi makagamuchira mudzimu+ wokugamuchirwa+ sevanakomana, iwo mudzimu watinoshevedzera nawo, kuti: “Abha,+ Baba!” 16 Iwo mudzimu+ wacho unopupurirana+ nomudzimu wedu+ kuti tiri vana vaMwari.+ 17 Zvino, kana tiri vana, tiri vagari venhakawo: chokwadi vagari venhaka vaMwari, asi vagari venhaka+ pamwe chete naKristu, chero bedzi tichitambura+ pamwe chete kuti tikudzwe pamwe chete.+ 18 Naizvozvo ndinoona kuti kutambura kuzhinji+ kwomwaka uno uripo hakumboenzaniswi nokubwinya+ kuchazoratidzwa matiri. 19 Nokuti zvisikwa+ zviri kumirira nomwoyo wose zvichitarisira+ kuratidzwa kwevanakomana vaMwari.+ 20 Nokuti zvisikwa zvakaitwa kuti zvive zvisina zvazvinobatsira,+ kwete nokuti ndizvo zvazvaida asi nokuna iye akaita kuti zvidaro, nokuda kwetariro+ 21 yokuti zvisikwa+ zvichasunungurwawo+ muuranda hwokuora zvova norusununguko runobwinya rwevana vaMwari. 22 Nokuti tinoziva kuti zvisikwa zvose zvinoramba zvichigomera pamwe chete uye zvichirwadziwa pamwe chete kusvikira zvino. 23 Kwete izvozvo chete, asi isuwo tine zvibereko zvokutanga,+ iwo mudzimu, chokwadi, isu tinogomera+ nechomukati, tichimirira nomwoyo wose kugamuchirwa sevanakomana,+ iko kusunungurwa mumiviri yedu norudzikinuro. 24 Nokuti takaponeswa mutariro+ iyi; asi tariro inoonekwa haisi tariro, nokuti munhu angatarisira chinhu kana achichiona here? 25 Asi kana tichitarisira+ chatisingaoni,+ tinoramba takamirira tichitsungirira.+ 26 Saizvozvowo mudzimu+ unotibatsira nokuda kwokushayiwa simba kwedu;+ nokuti hatizivi chinhu chinonetsa chatinofanira kunyengeterera patinofanira kunyengetera,+ asi mudzimu+ unotitetererera nokugomera kusinganzwiki. 27 Asi iye anoongorora mwoyo+ anoziva zvinoreva mudzimu,+ nokuti uri kuteterera zvinoenderana naMwari nokuda kwevatsvene.+ 28 Zvino tinoziva kuti Mwari anoita kuti mabasa ake ose+ ashandire pamwe chete kuti zvinakire vaya vanoda Mwari, vaya vakadanwa maererano nechinangwa chake;+ 29 nokuti akafanogadzawo+ vaya vaakatanga kuva nehanya navo+ kuti vaenzaniswe+ nomufananidzo+ woMwanakomana wake, kuti ave dangwe+ pakati pehama zhinji.+ 30 Zvakare, vaya vaakafanogadza+ ndivo vaakadanawo;+ uye vaya vaakadana ndivo vaakatiwo vakarurama.+ Pakupedzisira vaya vaakati vakarurama ndivo vaakakudzawo.+ 31 Saka, tichatii pazvinhu izvi? Kana Mwari ari kwatiri, ndiani achatirwisa?+ 32 Iye asina kunyange kuramba noMwanakomana wake+ asi akamupa nokuda kwedu tose,+ angaregerereiko kutipawo zvimwe zvinhu zvose pamwe naye?+ 33 Ndiani achapomera vakasarudzwa vaMwari?+ Mwari ndiye anovati vakarurama.+ 34 Ndiani achapa mhosva? Kristu Jesu ndiye akafa, chokwadi, uya akamutswa kubva kuvakafa, ari kuruoko rworudyi+ rwaMwari, uye anotiteterererawo.+ 35 Ndiani achatiparadzanisa norudo rwaKristu?+ Kutambura kana nhamo kana kutambudzwa kana nzara kana kushaya zvokupfeka kana ngozi kana bakatwa+ here? 36 Sokunyorwa kwazvakaitwa kuti: “Tiri kuurayiwa nokuda kwenyu zuva rose, takanzi tiri makwai okuti aurayiwe.”+ 37 Asi, pazvinhu zvose izvi tiri kunyatsokunda+ naiye akatida. 38 Nokuti ndine chokwadi kuti rufu kana upenyu+ kana ngirozi+ kana hurumende+ kana zvinhu zviripo iye zvino kana zvinhu zvichauya kana masimba+ 39 kana kukwirira kana kudzika kana chimwe chinhu chakasikwa hazvizokwanisi kutiparadzanisa norudo rwaMwari ruri muna Kristu Jesu Ishe wedu.+